Iindaba -Ukusetyenziswa kwendalo yelitye kwindalo
Ukusetyenziswa kwendalo yelitye lendalo kwindalo
Kwilitye lembonakalo yomhlaba, abayili bathandana nobugcisa bendalo kunye nobugcisa bamatye. Ukuqala kokulula kobuso bokwaphuka kunye nepateni yendalo kuyaphula ukuqhubeka kwentsusa, okuzisa ifuthe elibonakalayo kunye nefuthe elingalindelekanga.
Indawo yendalo yelitye luhlobo lwendalo ngaphandle konyango, olwenziwe ngokwendalo, njengesileyiti. Umphezulu wegranite unokuncitshiswa kwendalo kunye nokwaphuka.
Ukuba ujonga ubugcisa bendalo kunye neNzululwazi ezindongeni, umtsalane wasendle wendalo engathintelwanga ukhutshiwe kwimigodi erhabaxa. Ukukhanya kwelanga kuphumela ezantsi phakathi kwezikhewu eziphakathi kwamasebe namagqabi, umaleko ngokomaleko eludongeni. Esi sithuba ngesiquphe siba noxolo noxolo kunye nemvisiswano.
Ukungena apha ukusuka kwindawo ephucukileyo, abantu abaziva ukuba bafuna ukuma apha kwaye bazive kancinci.
Uluhlu lwe-groove ebusweni
Ukulungelelanisa ubunzulu kunye nobubanzi bomphezulu wamatye yindawo eqhelekileyo yezinyuko. Ayisiyiyo kuphela i-anti-skid, kodwa ikwanesiphumo esibonakalayo esibonakalayo, esenza ubume obukhethekileyo kubugcisa nakwiSayensi.
Le nzulu inzulu, eneentyatyambo eziyingqongileyo kunye nezityalo eziphakamileyo nezisezantsi, ziyancedisana, indoda ilandele amehlo ukulandela isiphelo esihle ngakumbi.
Ilitye lokujikeleza amaza ekhephu
Imigca yelitye elilitye lembonakalo yomhlaba ligudile kwaye licacile, limnyama kwaye limhlophe kwilitye, lilula kwaye linzulu, limnyama njengomhlaba njengamawa, ikhephu elimhlophe njengengxangxasi yoqeqesho lwekhephu. Ngamanye amaxesha kukhanya, ngamanye amaxesha kuzolile, njengomzobo womhlaba.
Ixesha Post: Oct-11-2020